KU SAMAYNAYO XUKUNYADA XASAASI AH GERMAN
Casharkaan, waxaan ku arki doonaa weedho taban oo Jarmal ah. Marka tusaale "Das istin e Type"(Tani waa ilmodiidmo "Tani ma aha ilmo" waxaan kuu sheegi doonaa sida loo helo noocyada jumlada.
Dabcan, waxaad u baahan tahay inaad ogaato sida loo dhiso weedho hagaagsan si loo fahmo mowduucaan. Casharkeenii hore, waxaan ku sharaxnay sida loogu sameeyo weedho wanaagsan af Jarmal.
Waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad ogaato mowduuca maqaallada Jarmalka. Casharradeennii ugu horreeyay, waxaan uga hadalnay maqaallo Jarmal ah. Laakiin haddii kuwa ay ku adag tahay xusuusintu ay eegaan arrinta qodobbada iyo maqaallada aan qeexnayn ee khaldan intaanay bilaabin mawduucan, halkan dhib kuma lahaan doonaan. Sababtoo ah waxaan u isticmaali doonnaa macluumaadka aan ku bixinno qaybtaas halkan.
Akhristayaasha dersay casharradeena hore waxay ogyihiin in waxyaabaha diidmada ah ee maqaalada ein / eine ay yihiin qodobbada kein iyo keine, waxayna ku darayaan macnaha "ma" aha xukunka. Taasi waa, jumladaha diidmada ah, halkii ein eine, maqaallada "kein / keine", kuwaas oo ah diidmadooda, ayaa loo isticmaali doonaa.
Das ist Ein Kind (tani waa ilmo)
Das ist kein Kind (tani maaha ilmo)
Das ist eine cat (tani waa bisad)
Das ist no cat (tani ma aha bisad)
Das ist Ein radio (kan waa raadiye)
Das ist kein radio (tani ma aha raadiye)
Waxaan sidoo kale sameyn karnaa weedho taban adoo adeegsanaya waxyaabo badan. Laakiin halkan mar labaad ayaan fiiro gaar ah u yeelan doonnaa, markale, aqoonteennii hore ayaa na hoggaamin doonta.
Waxay ku tusi doonaa. Waad ogtahay, oo leh magacyo kala duwan, mid waliba "dhinta" waa la qeexay.
Si loo magacaabo magacyadani, mid kasta oo "keine" ayaa loo isticmaali doonaa.
Sidaa daraadeed waxaan dhihi karnaa inkasta oo shayga jamac ahi uu isticmaalo calaamadaha sida xun,
"Keine" waxaa loo isticmaalaa, kein lama isticmaalo.
Das sind Kinder (kuwani waa carruur)
Das sind keine Kinder (kuwani ma aha carruur)
Das sind Hauser (kuwaasi waa guryo)
Das sind keine Hauser (kuwani maaha guryo)
Das sind Katzen (kuwaasu waa xayawaanka)
Das sind keine Katzen (kuwani maaha bisadaha)
Waxaad ku tababaran kartaa adigoo ku dhejinaya shaybaarada.
Shaqada wanaagsan ..
Tags: Qeybaha 10 ee naqshadeynta negative nemes, 10. fasalka nasiibka mawduuca, 9. fasalka nasiibka mawduuca, 9. fasalka caadiga ah, Calaamadaha xun ee german, ereyada taban ee ereyada 'german'